युबती हरुले ब्लाउजभित्र पैसा घुसाएर किन राख्छन् ? तपाईलाई थाहा छ ? (हेर्नुहोस पुरा विवरण) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/युबती हरुले ब्लाउजभित्र पैसा घुसाएर किन राख्छन् ? तपाईलाई थाहा छ ? (हेर्नुहोस पुरा विवरण)
बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने विचारकी प’क्षपाती हुँ । मलाई चाहिएका समान सँगसँगै बोकेर राख्न ठूलो हण्ड ब्याग बोक्ने गरेकी छु । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री थ्याचरका लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्ने कारण यहि भएपनि संसारभरीका महिलाका लागि भने नहुन पनि सक्छ । उनीहरुलाई लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्नु झ’ञ्झटिलो पनि हुने गरेको छ ।
गोजी नभएकै कारण मोबाइल, सानो पर्स र साचो लगायतका स–साना सामान राख्न पनि महिलालाई गा’ह्रो हुने गरेको छ । जसले गर्दा केही महिलाले ब्लाउजभित्र घु’साएर राख्ने गरेका छन् । यो देख्दा र सुन्दा हसिमजाक जस्तो लागेपनि महिलालाई भने साह्रै अ’प्ठ्यारो हुने गरेको छ ।
पहिले पहिले त पुरुषका लुगामा पनि गोजी हुने गरेको थिएन् । भारतमा अंग्रेज शासन शुरु भएसँगै गोजी राख्न थालिएको मानिन्छ, र त्यही बेलादेखि भे’दभाव पनि शुरु भएको हो । पश्चिमा देशका महिलाहरुका कपडामा गोजी नभएकै कारण भारतीय महिलाका कपडामा गोजी राख्ने चलन शुरु भएन् ।
बेलायती महारानी भिक्टोरियाको शासनकाल (सन् १८३७–१९०३) गोजीलाई पुरुषार्थका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । समयसँगै पुरुषका कपाडमा त गोजीको प्रचलन शुरु भयो तर, महिलाका लागि भने भेदभाव नै रह्यो । यो विभेदसँग फेसनको पनि स’म्बन्ध छ । फेसन डिजाइनरहरु महिलालाई सुविधा हुने गरी नभइ शरीर सुन्दर देखिने गरी पोशाक बनाउने गरेका छन् ।
यसलाई पनि पु’रुषवादी मा’नसिकता भन्ने गरिएको छ । सन् १८४० देखि फेसन डिजाइनरहरुले महिलाका लागि ठूलो घा’टी, पातलो क’म्मर, किनारमा घेरदार लगाउने चलन शुरु भयो । यो विस्तारै महिलाको पोशाककै रुपमा हेर्न थालियो । त्यसपछि महिलाका कपडालाई स्त, न, पेट र हि, प्सलाई देखाउने गरी डिजाइन गर्न थालियो ।
क्रियटिभ फेसन डिजाइनर क्यामिला ओल्सन यसलाई फेसन उद्योगभित्रको लै ङ्गिक वि भेद भन्छिन् । उनको विचारमा मध्यमवर्गीयको फेसन पुरुषप्रधान छ । महिलाका लागि डिजाइन गरिएका कपडा पातला, शरीरमा टिपिक्क लाग्ने किसिमले बनाउने गरिएको छ । उनी यसलाई भिक्टोरियन समयको मानसिकता भन्न रुचाउँछिन्, जति बेला महिलालाई सुन्दरताका रुपमा मात्रै हेरिन्थ्यो ।कपडामा गोजी नहुँदा महिलाहरु सधै ह्याण्ड ब्याग बोक्ने गरेको पाइन्छ । ह्याण्ड ब्यागको पनि छुट्टै डिजाइन, स्वरुप हुनथाल्यो र यो अर्को सामान बन्न पुग्यो । यसले पनि फेसन डिजाइनरहरुले महिलाका पोशाकमा गोजी हुनुपर्छ भन्ने सोच्न चाहेनन् । महिलाका लुगामा गोजी हुने वितिक्कै ह्याण्ड ब्यागको आवश्यकता हुदैन कि भन्ने फेसन डिजाइनरहरुमा प¥यो ।